घर दक्षिण अमेरिका फुटबल स्टोरीहरू अर्जेन्टिना फुटबल खेलाडीहरू जियोवानी लो सेल्सो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
LB ले एक फुटबल जीनियस उपनामको कहानी प्रस्तुत गर्दछ "मोनिटो“। यो जिओवानी लो सेल्सो बाल्यकाल कहानी, जीवनी, परिवार तथ्यहरू, अभिभावक, प्रारम्भिक जीवन, र अन्य उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण कभरेज हो जुन उनी थिए एक क्षणदेखि नै। NOTHING जब उनी बने लोकप्रिय.
जियोवानी लो सेल्सोको जीवन र उदय। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
हो, सबैलाई थाहा छ त्यो एक हो सर्वोच्च प्रतिभाशाली मिडफिल्डर जो Spurs मुनिको एक खेल-चान्जर बन्न पुगेको छ Jose Mourinho। जहाँसम्म, केवल केहि थोरैले जियोवानी लो सेल्सोको जीवनीको हाम्रो संस्करणलाई विचार गर्छन् जुन धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
जियोवानी लो सेल्सो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक पृष्ठभूमि र प्रारम्भिक जीवन
मिडफील्ड सामान्य Giovani लो Celso अर्जेन्टिनाको रोजारियो शहरमा अप्रिल १91996। को नौौं दिनमा जन्म भएको थियो। उहाँ आफ्नी आमा सान्द्रा र उनका बुबा जुआन लो सेल्सोमा जन्मेका चार बच्चाहरूमध्ये तेस्रो हुनुहुन्छ।
जियोवानी लो सेल्सो बाबुआमाको लागी जन्म भएको थियो जसको बारेमा थोरै मात्र चिनिन्छ। छवि क्रेडिट्स: इंस्टाग्राम र PxHere।
के तपाईंलाई थाहा छ जिओवानी एक अर्जेन्टिनी राष्ट्र हो जसमा इटालेली परिवारको उत्पत्ति छ? उनी रोजारियोको सरमिएन्टो छिमेकीमा हुर्केका थिए जहाँ उनले आफ्नो कान्छो भाई फ्रान्सेस्को र दुई ठूली दिदी लुसियाना र अगुस्टिनासँगै रमाइलो गरी बाल्यकाल बिताइरहेका थिए।
जवान जियोवानीले आफ्नो कान्छो भाइ फ्रान्सिस्को र दुई अन्य साथीहरूसँगै मजाले भरिएको बचपन बिताए। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
सरमिअन्टो नजिकैको एक मध्यम-वर्ग पारिवारिक पृष्ठभूमिमा हुर्किएको, जियोवानीको लागि फुटबल उत्साही हुनको लागि यो असम्भव थियो। जियोवानी बस्ने घर एउटा विशाल फुटबल पिचबाट केवल blocks ब्लकहरू टाढा थियो। यसमा जिओवानीलाई आफ्नो सानो भाइ फ्रान्सेस्कोसँग फुटबल अभ्यास गर्न पर्याप्त ग्यारेज पनि थियो।
जियोवानी लो सेल्सो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
अधिकांश मिडफिल्ड जनरलहरूले जस्तै जियोवानीले स्थानीय युवावस्था क्लबहरूमा प्रतिस्पर्धी फुटबलको पहिलो कदमहरू आफ्नो युवा जीवनको शुरूआत गर्ने क्लब र लिगको निर्णयको साथ छेउछाउ गर्नु भन्दा पहिले लिए।
सानात जोस भन्ने क्लव क्लबमा जिओवानीको क्यारियर ब्यक्तिसँग शुरू भयो जहाँ उनी दुई वर्षको गहन प्रशिक्षणमा अर्जेन्टिनाको प्रख्यात एटलटिका जर्ज ग्रिफा एकेडेमीमा सामेल भए।
उनले आफ्नो प्रारम्भिक बर्षको अवधिमा बाल्यकाल क्लबका लागि खेले। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
जियोवानी लो सेल्सो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
जब जियोवानी युवा अवस्थाको क्यारियर शुरू गर्न तयार भइसकेका थिए, उनीसँग अंग्रेजी टोली - एभर्टन सहित शीर्ष टोलीबाट आउने प्रस्तावहरू थिए। यद्यपि, त्यतिबेला १ 15 बर्षिय उमेरले आफ्नो बाल्यकालको सपनाको पूर्तिमा स्थानीय क्लब रोजारियो सेन्ट्रलमा प्रतिबद्ध।
रोजारियो सेन्ट्रलका लागि खेल्नु भनेको एउटा सपना थियो जुन उनले वर्षौंसम्म राखे र यसलाई प्राप्त गर्न तत्पर थिए। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
रोसारियो सेन्ट्रलमा हुँदा, जियोवानी स्किलसेट र परिपक्वतामा फूले जब उनी क्लबमा उत्रियो। वास्तवमा, फ्रान्सेली पक्ष पीएसजीको महिनौंसम्म जियोवानीमा नजर थियो र उनले रोसारियो सेन्ट्रलको लागि वरिष्ठ पदार्पण सत्र (२०१ 2015/२०१ completed) पूरा गरेपछि फुटबल सम्भावनामा हस्ताक्षर गरे।
जियोवानी लो सेल्सो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सडकमा फेम स्टोरी
जियोवानी PSG को लागी खेल गर्न शुरू गरेनन्। बरु उनी २०१ Ros/२०१ season को मौसमको लागि पहिलो टीमको अनुभव लिन रोसारियो सेन्ट्रलमा फेरि edण लिएका थिए। उसको dealण सम्झौता समाप्त भएपछि, मिडफिल्डर PSG को लागी अगाडि बढ्यो र मनपर्दोसँग खेल्ने सीमित अनुभव थियो डानी एल्व्स, एड्रियन रब्बोट, Draxler र क्याभानी २०१/2018/२०१ season को मौसममा।
आफ्नो loanण सम्झौता समाप्त भएपछि, मिडफील्डरले रोसारियो सेन्ट्रललाई बिदाइ गरे र अझ उच्च स्थानमा पुगे। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
यो ध्यान दिनु उपयुक्त छ कि PSG जियोवानीको लागि कुनै स्थायी ठाउँ थिएन। जस्तो कि, उनलाई किन्नको विकल्पको साथ स्प्यानिश पक्ष रियल Betis मा उनलाई ingण दिन कुनै समस्या थिएन। यो वास्तविक बेटिसमा थियो Quique Setien त्यो जियोवानी फार्म फेला पारे र स्पष्ट कारणका लागि क्लबसँग आफ्नो सम्झौता स्थायी गर्ने निर्णय गरे (अधिक खेल समय)।
जियोवानी लो सेल्सो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
रियल बेटिसको साथ आफ्नो क्यारियरको चरम सीमामा, जियोवानीले विषाक्त स्ट्राइकहरूको साथ गोल स्कोरि machine मेसिनको प्रतिष्ठा कमाए जुन विकासको अ English्ग्रेजी पक्ष टोटेनहम हटस्पुरले उनलाई aतुमा longणमा हस्ताक्षर गर्ने नेतृत्व गर्‍यो। यद्यपि, अर्जेन्टिना क्लबमा सled्घर्ष गर्दै थिए, हिप चोटपटकको लागि धन्यबाद भएन जुन उसले अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्यको बखत उठायो एक आशावादी जियोवानी अझै क्लब मा एक स्थान सुरक्षित गर्न कोशिस गर्दै थिए जब उनको देशवासी Mauricio Pochettino साथ प्रतिस्थापित गरियो Jose Mourinho.
Undeterred, जियोवानी UEFA चैम्पियन्स लीग मा रेड स्टार बेलग्रेड मा 4-0 Tottenham को जीत को दौरान स्कोरलाइन खोलेर आफ्नो नयाँ प्रबन्धक को लागी पक्ष पाउन खोजे। धेरै समय नबित्दै उनले एफए कपमा मिडल्सबरोको बिरुद्ध २-१ गोलको जितमा शुरुवात गोल गर्दै स्पर्स फार्म मिडफिल्डरको रूपमा आफ्नो स्थिति सिमेन्ट गरे।
उनले मुख्य गोलहरू योगदान गरे पछि फेमले उनलाई अँगाले कि जसले उनको स्थितिलाई स्पोर्ट्स स्ट्रिमर स्ट्राइकर्स मध्ये एकको रूपमा देखायो। छवि क्रेडिट: TheTelegraph।
हामीले उसलाई र साथी मिडफिल्ड पार्टनरहरू हेर्नु अघि यो कुरा मात्र हो, हैरी विन्क्स, टान्गु Ndombele, Dele Alli र गेडसन फर्नांडीस Spurs अर्को महान स्तर मा सार्नुहोस्। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो.
जियोवानी लो सेल्सो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - सम्बन्धी जीवन तथ्यहरू
जियोवानी लो सेल्सोको उत्साहजनक करियर जीवनबाट टाढा, उनीसँग एक अद्भुत प्रेम जीवन छ जुन उनको प्रेमिका Magui Alcacer ले सुन्दर बनाएको छ। उनी केवल जियोवानीकी प्रेमिका मात्र होइन तर एक स्विम्स सूट मोडेल, फिजियोथेरापिष्टका साथ साथ किनेसियोलजिस्ट पनि हुन्।
यस्तो अद्भुत प्रोफाइलको साथ, यो आश्चर्यजनक होइन कि जियोवानीले उनकी प्रेमिकालाई माया गर्छिन् र उनको कदर गर्छिन् जुन उनी धेरै वर्ष पहिले रोजारियोमा भेटेका थिए। जियोवानी र मागुईको सम्बन्धले कुनै बच्चाको जन्मलाई जन्माएको छैन - लेख्ने क्रममा - न त lovebirds ले छोरा (हरू) वा छोरी (हरू) लाई विवाह बाहिर राखेका छन।
जियोवानी लो सेल्सो गर्लफ्रेंड Magui Alcacer भेट्नुहोस्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
जियोवानी लो सेल्सो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - पारिवारिक जीवन तथ्य
जियोवानी लो सेल्सो पारिवारिक जीवनमा अघि बढ्दै, उनी सहयोगी अभिभावक र भाइबहिनीहरू पाएकोमा धन्यका हुन्। हामी तपाईंहरूलाई जियोवानीका परिवारका सदस्यहरूको बारेमा आफ्ना आमा बुबाआमाबाट जानकारी ल्याउँदछौं।
जियोवानी लो सेल्सोका बुबा र आमाको बारेमा: जुआन लो सेल्सो र सान्ड्रा क्रमशः मिडफिल्डरका आमा र बुबा हुन्। जियोवानीको समग्र विकास र प्रगतिमा उनीहरूको ठूलो योगदान उनीहरूको सम्झनामा ताजा छ। त्यस्तै, मिडफिल्ड जनरल सधैं आफ्नो बुबालाई प्रशिक्षणमा लैजान क्रेडिटको लागि क्रेडिट गर्न द्रुत हुन्छ। न त उनले यो याद गर्न बिर्सन्छन् कि उनको आमाले उनलाई अक्सर नम्र हुन र बलमा सधैं ध्यान केन्द्रित गर्न सल्लाह दिए। जियोवानीका अभिभावकहरू अझै पनि उहाँसँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ - लेख्ने समयमा - र उनी जीवनको सर्वश्रेष्ठ प्राप्त गर्दछन् भन्ने सुनिश्चित गर्न कोशिस गर्दैछन्।
जियोवानी लो सेल्सोका भाई बहिनीहरूको बारेमा: हामीले अघि नै भनेझैं जियोवानी लो सेल्सो आफ्ना बाबुआमाको तेस्रो बच्चा हुन्। उहाँसँग दुई ठूला साना बहिनीहरू छन् जसलाई लुसियाना र अगुस्टिनाका रूपमा चिनिन्छ र एक सानो भाइ - फ्रान्सेस्को जो लेखनको समयमा रोसारियो सेन्ट्रलमा मिडफिल्डरको भूमिका खेल्छन्। सबै s भाई-बहिनी सँगै हुर्कदै गर्दा सबैभन्दा रमाईलो जीवनको उत्तम जीवन थियो। तिनीहरू पनि एक अर्कालाई प्रेम र समर्थन गर्दछन्। जियोवानी लो सेल्सोका अभिभावकले निम्न बच्चाहरूलाई जन्म दिए।
LR बाट: फ्रान्सेस्को, जियोवानी, लुसियाना, अगस्टिना र जियोवानी फेरि। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
जियोवानी लो सेल्सोका आफन्तहरूको बारेमा: जियोवानी लो सेल्सोको विस्तारित पारिवारिक जीवनमा सर्दै, उनका पुर्खाहरू र परिवारको जराको कुनै अभिलेख छैन, विशेष गरी उनका बुवा हजुरबा हजुरआमा र हजुरआमा र हजुरआमा। त्यस्तै जिओवानीका काका, काकी र काका-मामा / दिदीबहिनीहरू धेरैजसो अज्ञात छन् जबकि उनका भतिजा र भतिजोलाई यो जीवनी लेख्दासमेत चिन्न सकेको छैन।
जियोवानी लो सेल्सो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - व्यक्तिगत जीवन तथ्य
जियोवानी लो सेल्सो को हो?… के तपाईंले कहिल्यै जिओवानी लो सेल्सोलाई टिक बनाउने कुराको बारेमा सोच्नुभएको छ? तपाईंले कति कठिन प्रयास गर्नुभयो उनको पिच व्यक्तित्वको सार निकाल्न कोसिस गर्नुभयो? यहाँ पाठहरु मा आफ्नो आँखा दाँज्न को लागी सही ठाउँमा छ कि तपाईं उसको एक पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्न प्लेमेकर व्यक्तित्व को बारे तथ्यहरु लाई प्रकट गर्दछ।
सुरुमा, जियोवानीको व्यक्तित्व मेष राशि चक्र हस्ताक्षर द्वारा निर्देशित व्यक्ति द्वारा प्रदर्शन गरिएको गुण झल्काउँछ। ऊ महत्वाकांक्षी, सहज, भावनात्मक बौद्धिक, ऊर्जावान छ र आफ्नो व्यक्तिगत र निजी जीवनको बारेमा तथ्यहरु खुलासा गर्नमा कुनै समस्या छैन। मिडफिल्डरको रुचि र शौक मा पौडी, यात्रा र आफ्नो परिवार र साथीहरु संग राम्रो समय बिताउने समावेश छ।
साथीहरूसँग राम्रो समयको अर्थ मिडफिल्डरमा धेरै हुन्छ। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
जियोवानी लो सेल्सो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - जीवन शैली तथ्य
जियोवानी लो सेल्सोको पैसा कमाउने प्रयास र खर्च गर्ने बानीको बारेमा, उसले तलब र तलबमा धेरै राम्रो कमाउँछ भने शीर्ष उडान फूटबल खेल्नको लागि जबकि समर्थनले उसको नेटवर्थको बृद्धि गर्न योगदान पुर्‍याउँछ जुन यो बायो लेख्ने समयमा समीक्षाको अधीनमा रहेको छ।
मिडफिल्डरलाई ड्राइभि driving् कारहरू भेटिएन जुन उनको अफवाह विलासी जीवनशैलीको बारे शंकाको पुष्टि गर्न सक्छ जबकि घर वा अपार्टमेन्टको मूल्य उसले अज्ञात छ। जे होस्, उनीसँग डिस्नेल्याण्ड पार्क सहित महँगो रिसोर्टहरूमा छुट्टि खर्च गर्न एक चीज छ।
जियोवानी लो सेल्सो- हेर्नुहोस् जो डिस्नेल्याण्ड पार्कमा राम्रो समय बिताइरहेको थियो। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
जियोवानी लो सेल्सो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड जीवनी तथ्य - अनियमित तथ्यहरू
हाम्रो जियोवानी लो सेल्सोको बाल्यावस्थाको कहानी र जीवनी समेटेर, उनको बारेमा थोरै ज्ञात वा अनकही तथ्यहरू छन्।
जियोवानीको लक्ष्य उत्सवको बारेमा: जस्तै गठरी र गब्रिएल यीशु, जियोवानीले आफ्नो दायाँ हात5फैलाइएको औंलाहरू माथि उठाइएर आफ्ना लक्ष्यहरू विशेष रूपमा मनाउँछन्। मिडफिल्डर यसमा हुँदा, ऊ आफ्नो देब्रे हात औंलाले औंलाले माथि उठ्छ जुन उसको दाहिने हाततर्फ औंल्याउँछ। मिडफिल्डरका अनुसार सबै छ वटा औंलाले आफैंसहितको परिवारको प्रत्येक सदस्यलाई श्रद्धांजलि दिन्छ।
यो प्रत्येक पटक होइन जब तपाईं अन्तर्निहित अर्थको साथ एक अद्वितीय गोल उत्सव देख्नुहुन्छ। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
जियोवानी इटालियन नागरिकता को बारे मा: मिडफिल्डरसँग ट्रेसिबल इटालियन विरासत छ। यसैले उनले देशमा नागरिकता प्राप्त गरे र त्यो इटालियन पासपोर्ट भए। यद्यपि जियोवानी मात्र मन पर्छ पापु गोमेज अर्जेन्टिना प्रतिनिधित्व गर्न छनौट।
फिफा रेटिंग: के तपाईंलाई थाहा छ कि जियोवानी लो सेल्सो फिफा 20 Rating 83 को समग्र मूल्या्कनले उसले कामको मात्राको राम्रोसँग बोल्छ जुन उसले आफ्नो स्किसेटसेट विकास गर्न सुरु गरे जबदेखि उसले माथि उडान फूटबल खेल्न शुरू गर्यो? चाखलाग्दो कुरा के छ भने, उनीसँग 89 to सम्म सम्मको सम्भावित रेटिंग पनि छ। रेटिंग्स कतै कतै जान्छ, तर माथि जान्छ भन्ने तथ्यलाई इन्कार गर्ने कुनै कुरा छैन!
प्रभावशाली र बढ्दो रैंकिंगहरू हेर्नुहोस् जुन शीर्ष उडान फुटबलमा जियोवानी लो सेल्सोको विकासको बारेमा राम्रो बोल्छन्। छवि क्रेडिट: यूट्यूब।
धुम्रपान र मदिरा: जियोवानी लो सेल्सो यस बायो को लेखेको समयमा धूम्रपानको लागि दिइएन। जे होस्, ऊ टोलीका साथीहरू, परिवार र साथीहरूसँग विशेष अवसरहरूमा जिम्मेवार रूपमा पिउँछ।
ट्याटू: मिडफिल्डर - feet फिट, १० इन्चको उचाईको साथ - युवा फुटबलरहरूको अवचेतन लिगमा खेल्छ जसको लेखनमा ट्याटू हुँदैन। जे होस्, उसले भविष्यमा शरीर कला पाउने योजनाहरूको नेस्टल गर्न सक्दछ जब उसले आफूलाई विश्व बेस्टमध्ये एकको रूपमा स्थापित गर्दछ।
के तपाईंले जिओवानी लो सेल्सो ट्याटू भेट्नुभयो?… टिप्पणी बाकसमा हामीलाई थाहा दिनुहोस्। छवि क्रेडिट: इन्स्टाग्राम।
धर्म: जियोवानी लो सेल्सोका आमा बुबाले उनलाई इसाई धर्मको पालनामा हुर्काए। यो उनका नाम सान्ड्रा र भाइबहिनी - अगस्टिना र फ्रान्सेस्को - नाम मा स्पष्ट छ। यद्यपि यो ज्ञात छैन कि जियोवानीले इसाई धर्मको अभ्यास गर्छन् कि छैन किनकि उनी सोशल मिडियामा र अन्तर्वार्ताका क्रममा धर्ममा ठूलो छैनन्।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो जियोवानी लो सेल्सो बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यांकहरू पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताका लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी तपाईका विचारहरुलाई सँधै मूल्य दिन्छौं र सम्मान गर्छौं।
डैनी गुलाबी बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
जेर्मेन डिभो बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य